Ndezvipi zvakanakira iyo Ibex kukwanisa kuenda kumakumi mapfumbamwe emapoinzi? | Ehupfumi Zvemari
Zvakare, kutya kwakabata vabati vepakati nepakati. Semhedzisiro yekukosha kudonha mumusika wemasheya unoburitswa mu United States, ne dow jones kuparara pamusoro pe5%. Uye izvo zvakare zvakaendeswa kune akaenzana yekondinendi yakare. Kusvika padanho rekuti Ibex 35 yatyora muyero wepfungwa wepfungwa zviuru gumi. Ichi chiito chakonzera indekisi inosarudzika yemusika weSpanish wemusika kuenda kumakumi mapfumbamwe emapoinzi munguva pfupi. Chokwadi chinotyisa vatyairi vakamira mumusika wezvemari.
Chero zvazvingaitika, isu tinofanirwa kutarisa chinhu chakanaka icho chiitiko ichi chinogona kuburitswa, chakapihwa nevamwe vevanonyanya kukoshesa vanoongorora zvemari. Nekuti mukudyara iwe unogara uchifanira kufunga zvakanaka uye kusvika pamakumi mapfumbamwe emakumi mapfumbamwe zvinogona kureva zvitsva mabhizimusi mikana. Nechinodikanwa chete kuti iwe uve mukuzara kwemari kuti uite mashandiro matsva muzvikamu zveSpanish. Hazvishamise kuti iwe une nzira dzinoverengeka dzekuita kuchengetedza kunobatsira kubva ikozvino.
Ichokwadi kuti iyo Ibex 35 yanga isina kushanyira aya mazinga emitengo kwenguva yakareba. Mushure mekutama mukati memupendero wakashama pakati pezviuru gumi kusvika gumi nemazana masere. Asi kutanga kwegore kwakonzera kuti vhudzi riiswe munzvimbo dzinenge dzese dzinotengeswa neruzhinji. Chaizvoizvo pasina kusarudzika, kunyangwe mamwe matunhu emakambani akave nehanya kupfuura mamwe. Chero zvazvingaitika, iwe uri kutarisana nematanho andatofunga kuti ndanga ndakanganwa. Asi zvakaitika muDow Jones zvakapa yambiro yekutanga nezve izvo zvinogona kuitika mumatunhu epasi rose.
1 Ibex 35, ichaenda kupi?
2 Kubhadhara pamatanho epasi
3 Ngozi dzekushandisa zano iri
4 Electrics pasi tambo
5 Kutanga kwakashata kwegore
Ibex 35, ichaenda kupi?
Kusanyatsoziva kukuru uko kune makambani madiki nepakati nepakati ndipo panowira razvino muIbex 35. Inoita kunge imwe yemapoinzi iyo painogona kumira pamatanho e9.000 mapoinzi. Nekuti kana zvikatyorwa, zvinogona kutove neimwe nzira yekudzika. Kusvika padanho rekuti hazvingashamise kana ichikwanisa kusvika iyo 8.300 points kana mamiriro ehupfumi anga asiri iwo ese akanaka anotarisirwa nevamiriri vemari panguva ino. Pamatanho aani unenge uri mukana wakanaka wekutenga kuitira kuti uchengetedze kudyara mukati nepakati nepakati.
Kusvika payo painogona kusvika pamatanho aya zvinoenderana nekuti inogona here kuzorora nerutsigiro rwakakosha rwunowanikwa pamakumi mapfumbamwe ezviuru. Izvo kune rimwe divi, ndicho chinangwa chinoteedzerwa neazvino kuwira mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities. Muzviitiko zvese izvi, unogona kutora mukana weizvi nhanho mune akachekwa kutenga mashoma masheya akadhura pane izvozvi. Nekuda kweizvozvo, usakanganwa kuti iyo-yenguva refu maitiro eSpanish stock stock ichiri kuwedzera. Ehezve, sekureba sekunge mazana mazana matatu nemazana matatu anoremekedzwa. Kana iwe ukatarisa pamusika wemasheya kubva pane yakanaka maonero, hapana mubvunzo kuti inogona ichakabata zvinonakidza zvinoshamisa kwauri kubva zvino zvichienda mberi.
Kubhadhara pamatanho epasi
Chimwe chinhu chakasiyana zvakanyanya ndechekuti parizvino iwe uri munzvimbo dzevatengi. Zvakanaka, mune ino mamiriro hauzove nesarudzo kunze kwekumirira. Asi pakusvika pamutengo wakaderera mutengo kuitira kuti nenzira iyi iwe ugadzire kutengwa kutsva kwezvikamu. Nechinangwa chekutanga chekusimudzira yako investimenti uye kubudirira kuwedzera mari inowanikwa kubva zvino zvichienda mberi. Iri zano riri nyore kwazvo kushandisa uye izvo zvinongoda moyo murefu mukusimudzirwa kwemakotesheni. Nedambudziko risinganzwisisike munzira iyo inogona kukanganisa yako investor mamiriro. Asi kuziva kuti mubairo uchave unopa mubayiro pane zvako zvaunofarira.
Kubva pane imwe nzvimbo yekutarisa, izvi zvigadziriso zvemutengo zvinogona kukubatsira iwe kuchinja hunhu. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kusarudza yemusika wekutangisa chikumbiro icho chiri nehunyanzvi hwehunyanzvi chimiro uye ine mukana wekudzosazve ine simba rakanyanya. Iwe unongofanirwa kutora iyo mutengo wemakomisheni izvo zvinoda mashandiro aya mumisika yemari. Asi kana zvese zvikafamba mushe, usakahadzika kuti iwe unozogona kuzviisa pamwe neakareba vimbiso yekubudirira. Hazvishamisi kuti iyi ndiyo imwe yemaitiro anoshandiswa nevamwe vevashambadzi vadiki nepakati vane ruzivo rwakanyanya mumisika yemari. Nemhedzisiro inogutsa kwazvo mune chirevo chemari.
Ngozi dzekushandisa zano iri
Nekudaro, kusarudza iyi nzira hakuna njodzi. Nekuti zvirizvo, zvinogona kukonzeresa nzvimbo dzako kuti dzifambe mu bearish terrain uye nekudaro kurasikirwa nemaeuro mazhinji kubva zvino zvichienda mberi. Uye zvakare, kune imwe nhevedzano yekusahadzika iyo inogona kukukoka iwe kuti usavhure zvinzvimbo muSpanish inosarudzika index kana ichisvika pamatanho e9.000 mapoinzi. Pakati pazvo pane zvinotevera zviitiko zvatinokufumura pazasi:
Zvinoshamisa kushaya simba izvo zvinogona kugadzirwa munzvimbo dzekutenga. Kusvika padanho rekusiya pane kuyerera chaiko mumisika yemari. Hazvishamisi kuti ivo vanokwanisa kuendesa iwo mitengo yekuchengetedzwa kumahombekombe akaderera kupfuura iwo azvino.
Hukuru hwekupokana hwemakotesheni kuti ave kufamba yakadzika bass player. Semhedzisiro yechiito ichi, kuzvishingisa pachayo kwenguva refu muzvinzvimbo izvi zvisingadiwe kune vashoma uye vepakati varimi. Kudemba chinguva chidiki mushure mekutanga mafambiro mumari.
Usakahadzike kuti kana ukatyora nekusimba kukuru a kutsigirwa kwakakosha zvinogona kutora kuchengetedzwa kwenguva yakareba kuti zvidzore. Izvi pakupera kwezuva chinhu chinonzwisisika mumisika yezvemari uye iwe unofanirwa kushandiswa kune ichi chinhu chechinhu chiri kuitika mumusika wemasheya. Beyond zvimwe zviitiko zvinogona kugadzirwa chero nguva.
Mumamiriro ezvinhu akaipisisa, haugone kutonga kuti iyo Ibex 35 nhanho inogona kukwira kusvika pamakumi manomwe ezviuru kana kunyangwe zvishoma zvishoma kana iyo technical chinhu chinotambura yemadzinza aya. Inogona kugara ichiwedzera kana kushaya simba kuripo mumisika yemari. Hazvishamise kuti, mune downtrend yakaipisisa inogona kugara ichiitika. Usakanganwe kubva zvino zvichienda mberi.
Ehe, mashandiro mu pfupi Ivo vanozowana zvakanyanya kuomarara kudzivirira zvaunofarira. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekuvanonoka munguva uye chinhu ichi chinogona kugadzira chinopfuura chinetso chimwe kuti iwe ugadzire yako nzira yekudyara. Chinhu chisiri mukati mekuverenga kwako kuti kuchengetedza kwacho kubatsire nenzira inoshanda uye yakaenzana.
Electrics pasi tambo
Asi kana paine chikamu chemasheya chakashata zvakanyanya muhunyanzvi hwayo, izvo hazvisi izvo kunze kwesimba remagetsi nemagetsi. Neshanduko yakakosha mune angangoita ese kukosha kwayo. Kubva kuEnagás kuenda kuGesi Zvakasikwa kuenda kuburikidza neiyo yakasimba kwazvo Iberdrola. Ivo vese vanotungamira kurasikirwa kusvika parizvino gore rino, nekudzikira kuri pamusoro kunyangwe 10%. Zvikuru kushamisika kwevadiki nevapakati varimimari vaitarisira zvimwe zvakawanda kubva pane izvi sarudzo muSpanish equities. Hazvishamisi kuti matanho akasimudzirwa nehurumende anga ari iwo anokonzeresa shanduko nekukasira seiyi. Pamusoro peimwe tsika iyo priori inotakura dzimwe njodzi mashandiro ayo.
Zviito zvemasheya mune ino yakakosha chikamu zvinotsanangura kune imwe nhanho shanduko yemusika unoenderera mukati memwedzi yekutanga yegore. Iko kwaakakwanisa kutyora yakakosha yepfungwa danho rezviuru gumi. Kusvika pakuti iye anogona kunongedza mafambiro ake kusvika ku10.000. Nemupiro wekusarudza kubva ku magetsi nemagetsi. Chinhu icho varimi vaive vasina kana pakutanga kwegore. Uye kunyange zvinhu zvinogona kuwedzera kuipa mumwedzi iri kuuya nekuda kwekuderera kwehunyanzvi hwayo.
Kutanga kwakashata kwegore
Iyo Ibex 35, yechikamu chayo, ndiyo imwe yeakaipisisa indices yeEuropean equities, pamwe nekuda kweiyo zviitiko zviri kuitika muCatalonia. Dhonza kuitira kuti hunhu hutangezve kumusoro kumusoro mumitengo yavo. Nezvisingawanzo kunze uye zvese zvavo zvinochengetedza nguva. Saka hazvishamisi, kuti rave riri rimwe remakore akaipisisa kutanga mumakumi emakore apfuura. Iko kunosarudzwa index yeSpanish stock market yakasiya zvinopfuura gumi%. Chete mumavhiki mashoma uye nekupererwa nechikamu chikuru chevashandisi vanotarisira kudzikama uye kugadzikana kwekutanga kota yegore. Pakupedzisira hazvina kunge zvakadaro.
Nekudaro, pachine nzira refu yekufamba kusvika kupera kwegore uyezve chero chinhu chinogona kuitika. Kunyangwe iwo ma equities anotendeuka munzira yakanaka zvakare uye anokwanisa kukwira pamusoro pezviuru gumi. Kana zvirizvo, ikozvino unenge uri mukana wakanaka wekudyara iyo mari. Nekuti, pakati pezvikonzero, ichave ine inoratidzira kwazvo yekuongorora mikana yekuvhura nzvimbo panguva ino. Kunyangwe nenjodzi dzinosanganisirwa mukuita kwayo, nekuti inogona kuwira mune yakakosha kushushikana kwemusika wemasheya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ndezvipi zvakanakira iyo Ibex kukwanisa kuenda kumakumi mapfumbamwe emapoinzi?